တနေ့ပြီးတနေ့ (၇) Day by Day (7) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » တနေ့ပြီးတနေ့ (၇) Day by Day (7)	26
တနေ့ပြီးတနေ့ (၇) Day by Day (7)
Posted by Ma Ma on Mar 17, 2015 in Literature/Books, My Dear Diary, Think Different | 26 comments
မတ်လဆန်းမှာပဲ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ပြီးသွားလို့ အမီလိုက်နိုင်တော့မယ်လို့ ထင်မိပေမယ့်
ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကနေပဲ လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒီလကတော့ လိုတိုရှင်း လ လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ လိုတိုရှင်း ကာတွန်းတွေကို ကြည့်ပြီး…..
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်တွေးမိတာလေးတွေ ဖြည့်ရေးရင်း
ဒီကာတွန်းကိုတော့ တဏှာရဲ့သဘောလို့ မြင်မိတယ်။
တွယ်တာမိ မက်မောမိလို့သာ ပင်ပန်းနေရတာပေ့ါ။ ကိုယ်ကတော့ မသိပဲ ပြောချင်တယ်။
သူများကိုတော့ မပြောလည်း သိပါတယ် လို့ ပိတ်ချင်တယ်။ မြင်မိတဲ့ အလှချင်းတော့ ကွာလိမ့်မပေ့ါ။ အာကာသထဲမှာ စာရေးဖို့ ခဲတံကို အသုံးပြုသလိုမျိုးပေ့ါ။
ဒါပေမယ့်လည်း တခါတလေမှာ လွယ်တာကို မတွေးမိလို့
ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်တရားစခန်းဝင်ခါနီးလို့ပဲ အတွေးတွေက ချော်နေသလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွေးမိတယ်။
ဥစ္စာရှိသူက ဥစ္စာရှိလို့ ပျော်နေကြတာပဲပေ့ါ။
အဲဒီတော့ ပညာမရှိ ဥစ္စာရှားပါးတဲ့သူတွေရော ငိုနေကြသလားလို့ မထင်ပါနဲ့။
ရရစားစား လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားတွေလည်း သူတို့ဘ၀နဲ့ သူတို့ပျော်နေကြတာပါပဲ။
ပျော်တာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာတာ ဘာကွာသလဲ မသိဘူး။ ရိုးသားတာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရိုး တာနဲ့ အ တာ ကို နယ်စည်းမခြားတတ်သေးဘူး။ ခွင့်ပြုတော့ပြုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တောင်ပံပါဖို့တော့ လိုသေးတယ်။
မမြင်ရတဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ကံတရားကြောင့်
ကျရှုံးခြင်းတွေလည်း ကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကြိုတွေးပြင်ဆင်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်မယ့်အစား ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထဲက သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပေ့ါ။
အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ။
တနေ့ပြီးတနေ့ (၇) ကာတွန်းတွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးပါ။
ဖြစ်ပျက်မှုအပေါ်မှားယွင်းစွာတုန့်ပြန်မှုက ဆိုးကျိုးကိုပဲ ရစေနိုင်တာပေ့ါ။
တနေ့ပြီးတနေ့ (၆) မှာ ကိုခင်ခ က
ပုံလေးတွေ ဒေါင်းထားပြီး သူ့နေ့နဲ့သူ ကွန်ပျူတာမှာ နောက်ခံလေးထားရင် ဟန်ကျလေမလားပေါ့လေ။
လို့ ဆိုထားတာကို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အမြန်ပြေးလွှားတဲ့အနေနဲ့ ဒီလကို ၂ပိုင်းပဲ ခွဲပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
အမီလိုက်နိုင်အောင် နောက်အပိုင်းကို အမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပ့ါမယ်။
black chaw says: မဂ္ဂဇင်းထဲက အော်ပီကျယ် ကာတွန်းတွေ ဖတ်ရသလို
Ma Ma says: အမိုးနဲ့ခေါင်းဆောင့်ပြီ ကိုဘလက်ရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ပညာတတ်သူက ပညာတတ်လို့
ရရစားစား လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားတွေလည်း သူတို့ဘ၀နဲ့ သူတို့ပျော်နေကြတာပါပဲ
ဒါ​ပေမယ့်​ အဲ့လူတန်းစား​တွေလိုင်းပူးသွားရင်​​တော့ နိမ်​ချမှု​တွေ အားငယ်​မှု​တွေ မတရားမှု​တွေ မသမာမှု​တွေနဲ့ အ​ပျော်​​တွေ ​ပျောက်​ကုန်​တတ်​​ရော
Ma Ma says: ဘ၀ကို နှစ်သက်ကြတာကို မိဖုရားကြီးကနေ ချေးပိုးထိုးကောင်ဘ၀ရောက်သွားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလိုမျိုး
ကိုယ်ရရာဘ၀ကို နှစ်သက်ကြ ပျော်ရွှင်ကြလို့သာ သေရမှာ ကြောက်ပြီး၊ နေရဖို့အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် မမောနိုင်၊ မပမ်းနိုင်ကြိုးပမ်းနေကြရတာကို ပြောချင်တာ သော်ရေ။
ခင်ဇော် says: သများးတော့ အမြဲ မိုက်မဲနေတယ် ပြောရမယ်
Ma Ma says: မိုက်တဲ့ဘက်မှာ ကိုယ်လည်းပါတယ်။
မိုက်ဖော်မိုက်ဖက်တွေ များတယ်နောာာာာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်တာ ရပ်
လုံးချာပတ်ချာ လည်နေသော ကျနော်…………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မလျှော့မတင်း စောင်းကြိုးညှင်း လေ ဖိုးသိကြားလေးရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: သူများကို တရားပြပြီး ကိုယ်တိုင် တရားမရနိုင်သေးတဲ့ မောင်မာဃပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: မတူသောအမြင်လေးနဲ့ နဲနဲပေါ့။
3idiots ထဲမှာပါတယ်လေ။ အာကာသထဲမှာ ခဲတံသုံးရင် ခဲမှုန်လေးတွေေ လျာက်လွင့်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာမို့တဲ့။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့ကတင် Discovery channel ။ How it is made? အစီအစဉ်မှာ အာကာသသုံး ဘောပင်ထုတ်လုပ်ခြင်း ကြည့်လိုက်ရတယ်။ ရေထဲမှာစာရေးပြသွားသဗျ။ အများပြည်သူသုံးတောင် ထုတ်ရောင်းနေ မှတ်တယ်။
သဂျီးရေ့။ ။ လက်ဆောင်ပေးပါဗျိုးးး။
Ma Ma says: အာကာသထဲမှာ ရေးဖို့ ခဲတံသုံးတယ်ဆိုတာ နိုင်တီးဂွမ်တိက ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအတိုင်းပြောပြတာ။
သတင်းအသစ်သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုစွယ်တော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာက အကြောင်းဆိုတာလေး သဘောကျမိတယ်..
ဟုတ်တယ် အန်တီမမရေ….။ ကြုံလာတဲ့အရာတစ်ခုပေါ် ကိုယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ပြတာပဲ ထင့်…။
ဂျပန်တွေ မဟာမိတ်တွေကို စစ်ရှုံးတော့ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာတယ် ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့….။ ဒါလဲ အရှုံးသမားရဲ့ အနိုင်ပိုင်းလိုက်မှုတစ်ခုပဲလို့ မြင်တယ်… ။ တုံ့ပြန်မှု မှန်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ….။
pooch says: မမကတော့ အခါတွင်း ရိပ်သာဝင်ဖို့ သေချာပြီပေါ့
သများကတော့ ခရီးသွား mode ကို on လိုက်ပြီ
ဒီနေ့ ရုံးပိတ် မနက်ဖြန်စထွက်
ပြန်ရောက်တဲ့နေ့ ရုံးပြန်တက်ပဲ ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်ကို မလောက်လို့ ခွင့်က ၂ ရက်ကြိုတင်ရအုန်းမယ် လိုလိုမယ်မယ်
နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ် ဘယ်လိုလာအုန်းမလဲ မသိဘူး အစက ရန်ကုန်က သွားရမယ်ထင်နေတာ အခုတော့ မန်းလေးကပဲ စထွက်ရတော့မယ်
Ma Ma says: @ Kaung Kin Pyar
မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် လက်ရုံးရည်တင်မကဘူး၊ နှလုံးရည်လည်း လိုသေးတယ်။
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း၊ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတုန်း၊ အခြေအနေလည်းပေးတုန်း၊ ငွေလည်းတတ်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေစုံမှ အိပ်မက်နောက် လိုက်နိုင်တာမို့ အားပေးတယ်။
ကိုယ့်တုန်းကလည်း နှစ်သစ်တစ်နှစ်ပြောင်းလို့ ပြက္ခဒိန်အသစ်ရတာနဲ့ ပိတ်ရက်ရှည်ကြည့်ပြီး ခရီးသွားဖို့ပြင်တော့တာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: သိပ်ကောင်းတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေပဲ
kai says: အဲဒီထဲက.. တခုတခုကို.. ဆွေးနွေးရင်.. စာတပုဒ်အေးဆေးရတယ်..။
စာပေဟောပြောပွဲဆိုရင်.. တခုချင်းရှင်းယုံနဲ့.. ၁နာရီအသာလေးဟောလို့ရ..။
ကောင်းလေစွ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (အဲဒီထဲက.. တခုတခုကို.. ဆွေးနွေးရင်.. စာတပုဒ်အေးဆေးရတယ်..။)
တော်ကြာမှ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်နေရအုံးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: အဲဒီလို ဗမာဇတ်လမ်းလေးများရိုက်ခြင်လို့.. လုပ်အားလှူကြမယ့်သူများရှိမလားလို့..
Post by grafik tasarım dergisi.
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ရေ
Seeing that Circle of Kindness makes me feel very happy.
ဒီမှာ တော့ ဒီလို လူ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မေတ္တာ နဲ့ ကူညီတာ တွေ၊ လူသားချင်း စာနာမှု တွေ မြင်နေကျ မို့
ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာလဲ ဒီလို မျိုး မြင်ကွင်း တွေ ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်ကတော့ မြန်မာပြည် မှာ မေတ္တာတရား တွေ နဲ့ အချင်းချင်း ဖေးမ တတ် တဲ့ နိုင်ငံပါ။
အခုတော့ လောဘတွေ၊ ဒေါသ တွေ၊ မောဟ တွေ အောက်မှာ ချမ်းမြေ့ခြင်း တွေ ပျောက်နေပေါ့။
တစ်ချို့လဲ ချမ်းသာတော့ လက် ကတော့ ပေးနေတယ်။ (နာမည်ကြီး ဖို့ အတွက်လဲ ပါမလား)
စိတ်ထဲ က မပါတော့ မေတ္တာ ဆိုတာ ကို မမြင်ရဘူး။
ကျွန်မ လဲ ပြီးခဲ့ တဲ့ အပါတ်ထဲ က ဈေးဝယ်ဖို့ တွန်းလှည်း အတွက် အကြွေရှာ နေတုန်း လူတစ်ယောက် က သူ့လှည်း ကို (ပိုက်ဆံ ကို ပြန်မထုတ်တော့ ဘဲ ) ကျွန်မ ဘေးမှာ ထားသွားတယ်။
ကျွန်မ လဲ ဈေးဝယ်ပြီး သူ့ပိုက်ဆံ ကို အလှူခံ ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ထဲ ကလဲ သူ့ကို မေတ္တာပို့ ပေးပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီ က လူ တွေ က ချမ်းသာ သူ လား၊ ဆင်းရဲ သူလား မသိနိုင်တော့ဘူး။
ချမ်းသာသူ ကလဲ ထူးပြီး ဟိတ်ဟန် ထုတ်မနေဘူး။
သူလို ကိုယ်လိုဘဲ။ လူ နဲ့ လူ ဟာ အချင်းချင်း တန်းတူ စိတ်ထားနိုင် နေကြပြီ။
သူများ အထင်ကြီးဖို့ အတွက် မရှိတာ ကိုလဲ ရှိသယောင် လုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ ဘဲ လူ့ဘ ဝ တိုတို မှာ အချင်းချင်း မေတ္တာသက်ဝင် လို့ ရတာပေါ့။
kai says: ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. မူလသန္ဓေမှာ.. ဒီလိုဓလေ့ပါပြီးသားကို.. ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံမြောက်လုပ်ပြီး.. လူကိုအတ္တတုံးကြီးဖြစ်အောင် လုပ်ခံလိုက်ရတာလို့မြင်မိတယ်..။
လူတကိုယ်.. ၃ကိုယ်ခွဲ.. ဒီဘ၀ငါကံမကောင်းတာရှေ့အတိတ်ဘ၀ကလုပ်ရပ်ကြောင့်ရယ်လို့ထင်.. နောင်နောက်ဘ၀ကောင်းအောင်.. “ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံမြောက်” သူတွေကို(သာ)လှူ..အရုပ်တွေ.. အုပ်ပုံတွေတည်..ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာလို့.. ထင်မိတယ်..။
ဘကကျောင်းတွေကစပြင်ရင်.. နောင်မျိုးဆက် ၃ခုလောက်မှာ ဖြစ်သွားမှာပါ..။
အမတော်မမက.. တနေ့တပုဒ်နှုန်းတင်လည်း.. မမှုရေးချမမရ..
အဲဒီအမတော်က.. ရသမျှ.. ကျုပ်ကိုပြန်လှူမှာတဲ့ဗျ..။
မယုံရင်မေးကြည့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ပြော၊ ပြော။ ဒီနေ့ တော့ ဘေးမဲ့ ထားလိုက် ဦးမယ်။
ကျန်တာ တော့ သဘောမျှပါတယ်။
ဘကကျောင်း ကို ဆွဲထည့် တာ ကတော့ လောလောဆယ်မှာ နဲနဲ အစွန်းရောက်နေတယ်။
kai says: ကမ္ဘာပါတ်နေ(နိုင်)တဲ့..စာရေးနိုင်သူရဟန်းတော်တော်များများကတော့.. ကြိုးစားစာရေး.. တရားဟော.. ပြင်ပေးနေတာပဲ..။
သဘောက.. အခြေခံကိုမှာက.. ပြဿနာလို့ပြဆိုတာပေါ့..
လူသားဆိုတာမျိုးကလည်း.. ကလေးဘ၀မှာသင်ကြားခံလိုက်ရရင်.. စွဲသမှ.. ဖျက်မရအောင်စွဲတယ်လေ…။ ကြီးမှသွားပြင်ခိုင်းရင်.. မရသလောက်ဖြစ်သွားတာပါ..။
ဘာသာရေးကျောင်းနှင့်… အတန်းပညာကျောင်း.. လုံးဝပြတ်သားစွာခွဲခြားခြင်းသာ.. အဖြေ….လို့..။
Ma Ma says: ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ လူအချင်းချင်းယိုင်းပင်းတတ်တဲ့ဓလေ့၊ ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေ တိမ်ကောရာက ပပျောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ရွာထဲက စာတွေကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြန့်ဝေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောပြမိပေမယ့် တိုးမပေါက်ဘူး။
အနောက်နိုင်ငံတွေက လူသားဆန်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ၊ နိုင်ငံကြီးသားပီသပုံတွေကို သဂျီးတို့ မလတ်တို့လို နိုင်ငံတကာအသိအမြင်ရှိတဲ့သူတွေက ပြောပြလို့သာ သိလာရတာ။
ကိုယ့်အနေနဲ့က ရေကို ချွေတာသုံးဖို့ကအစ၊ အစားအစာကို အလဟဿ မဖြစ်စေတာ အလယ်၊ အချိန်ကို မဖြုန်းပစ်ဖို့ အဆုံး ပြောချင်တာတွေ သိစေချင်တာတွေ အများကြီးပဲ။
သဂျီးပေးတဲ့ ဗွီဒီယိုလင့်ခ်လေးကို ကြည့်ပြီး ဒီလိုအသိပညာပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်။ (အမတော်က.. ရသမျှ.. ကျုပ်ကိုပြန်လှူမှာတဲ့ဗျ..။)
ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်ုပ်အများကြီး စဉ်းစားရပါအုံးမည်။ Was this answer helpful?LikeDislike 7303
etone says: ဘကကျောင်းက ဘုန်းကြီးတွေကဦးဆောင် တည်ထောင်လို့ ဘာသာရေးပျိုးထောင်ပေးမှု အနေနဲ့ စာမသင်ခင် ဘုရားရှိခိုးတာ ဘာညာရှိမယ် ။
ဒါပေမယ့် စာသင်ပေးတဲ့ အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ သင်ပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတော့ မရှိဘူးလေ သဂျီးရဲ့ ။
မဲမဲ ဖြူဖြူ လာသမျှ သင်ပေးမှာပဲ ။ အိမ်းးးးး
ပြောချင်တာကလေ … ဘကကျောင်းတွေ ပေါ်လာတာ ၊ ဘာသာရေး စည်းရုံးမှု တစ်ခု အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပေါ်လာတာ မဟုတ် မဟုတ် …လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်းးးးးးး Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ၁၁ ရက် မြောက် ပုံ ကို ကြည့်ပြီး ငယ်တုန်း က သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးဖူး တဲ့ ဆိုတာ ကို မဆီမဆိုင် ပြေးပြီး သတိရတယ်။
၁၂ ရက် ကတော့ အိမ်မက် ဆိုတာ မဖြစ်လဲ ဖြစ်တာ ကို ဘဲ ပြန်ပြီး အိမ်မက် လိုက်တော့ တယ်။
ပုံလေး တွေ တစ်ကူးတစ်က တင်ပေးလို့ ကျေးဇူး ပါ ချစ်မမ။
ကျန်ပုံ များ ကိုလဲ စောင့်နေပါသည်။
သူကြီး ကြည့်ရတာ တစ်နေ့ တစ်ပုံ တွေ့ချင်တယ် ထင်ရဲ့။
ပါရမီ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါလေ။ lol:-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .လွယ်နေတာကိုခက်အောင်လုပ်နေကြတာတော့ လက်ရှိအစိုးရပဲ .ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ လူအချင်းချင်းယိုင်းပင်းတတ်တဲ့ဓလေ့၊ ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေ .တိမ်ကောရာက ပပျောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ .အဓိကကတော့ ကျုပ်တစ်ခါတင်ပြဖူးသလို မရိုးသားကြတော့လို့…ယုံကြည်မှုကိုခုတုန်းလုပ်လိမ်လို့